Kanzuru yeChitungwoza inoti vashandi vayo vanomwe vakabatwa neCovid-19, uye vamwe makumi maviri nemumwe vari pavo vega mushure mekusangana nevanhu vane chirwere ichi.
Vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuru yeChitungwiza, Doctor Tonderai Kasu, vanoti izvi zvawedzera kuderera kwehuwandu hwevashandi veboka ravo rezvehutano zvekuti kanzuru yavo yamanikidzwa kuvhara kiriniki yayo yeSaint Mary’s.
Dr Kasu vanoti mushandi mumwechete akatofa neCovid-19 mushure mekunge awanikwa aine chirwere ichi.
Vashandi vekanzuru yeChitungwiza vaigara vachichemachema kuti havana zvekuzvidzivirira kubva kuchirwewre ichi zvakakwana, asi Doctor Kasu vanoti kanzuru yavo yanga ichiedza napose painogona napo kuti zvikwanisiro izvi zviwanikwe.
Doctor Kasu vanoti kunyange hazvo vavhara kiriniki yeSaint Mary’s, ichange ichingobatsira varwere vanenge vachida kubatsirwa zvechimbichimbi chete, asi vamwe vose vanofanirwa kuenda kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzakavhurwa vonobatsirwa ikoko.
Hurukuro naDoctor Tonderai Kasu